Ukugonywa ngokumelene herpes: Izimo kanye nokubuyekeza. Ukuvimbela i-herpes on the izindebe
abaningi kakhulu ibhekene nokuqubuka, izinhlungu eziba ebusweni (nezinye izingxenye zomzimba), ababiziweyo herpes. Ngaphezu kwalokho, kuyinto isici esibalulekile yezimonyo, kusukela ngisho nesenzakalo Bubbles enjalo ihambisana ukulunywa futhi ubuhlungu. Zikhona izindlela eziningi ukwelashwa kanye nokuvimbela izifo ezinjalo. Omunye wabo - umgomo ngokumelene herpes.
Isici igciwane herpes wukuthi seziqalile emzimbeni wethu, ihlala phakade. Nokho, idlanzana elithile labantu engasoze ufunde indlela lesi sifo kwenzeka. Abanye ngokuvamile uhlushwa Ukuphinda yayo. silwanyana okunjalo libhujiswa UV futhi izibulali-magciwane ahlukahlukene. In imvelo, igciwane akahlukile ukumelana, kodwa abandayo kwenza ukuthi iphila. Omunye zenyathi kuyinto ezimise okwama-tile (noma-ke kubizwa ngokuthi i-herpes zoster). It lihlasela isimiso sezinzwa futhi isikhumba. Futhi ukuqubuka kuhambisana ubuhlungu edabukisayo. Ekuqaleni, herpes zoster kuphakamisa ukubukeka inkukhu Pox. Ngemva kwalokho, lona luhlala emzimbeni bese ungakwazi ukuzibonakalisa e ifomu sokuphikisana. The njalo kunazo obala igciwane abadala.
Izinhlobo herpes amagciwane
Ukwabela zinhlobo eziyisishiyagalombili silwanyana. Uhlobo lokuqala nelesibili kukhona herpes simplex. Ziyahlukahluka kuye izifo ukuthi kumkhathaze. Phezu ukusebenza kwawo Uhlobo lokuqala kwenzeka herpes kwesikhumba, izindebe, kwesibili - zangasese herpes. Igciwane elibangela upokisi, iphathelene uhlobo lwesithathu. Kukhona igciwane Epstein-Barr (uhlobo lwesine). It uyakwazi ukubanga ukubukeka izimila kanye mononucleosis ezithathelwanayo. By zenyathi yesihlanu zihlanganisa cytomegalovirus. Kuthinta nezicubu isibindi, okubangela i-pneumonia. Iqembu yesithupha neyesikhombisa - ke rozeolovirus. Igciwane i-herpes, okubhekiselwa kulo ngokuthi uhlobo lwesishiyagalombili kwethonya inkambo immunodeficiency syndrome (kuzuze).
Ekuqaleni lesi sifo bavele ubuhlungu endaweni lapho kamuva izogxila herpes. Ukwengeza ubuhlungu ukulunywa, evutha isasasa. Ngemva kwesikhathi esithile, ububomvu livela, shashaza ke encane egcwele uketshezi. Ezinsukwini ezimbalwa inani labo wande. Khona-ke wavele neziqu endaweni yabo ivela uqweqwe. Ngokuvamile lezi zindawo ulahlekelwe lesikhumba yabo, kodwa lokhu mkhuba luthatha isikhathi. Kukhona nezinye izindawo eziningana lapho izimpawu ezihambisana ifomu ezinkulu nakakhulu lesi sifo. Okokuqala, kukhona nokwanda lokushisa, engaveza izimpawu of meningitis (ubuthakathaka, ezinzima nekhanda okungazelelwe). Lapho ezwa umonakalo waphawula nokuqhuma kule ndawo, umuntu eqala ukuzwa okubi kakhulu. Lymph node ukwanda ngobukhulu.
Ezimweni eziningi, isifo Evikini elilodwa noma amabili. Kodwa kwezinye izimo, kumele kahle therapy (izifo concomitant, immunodeficiency, herpes eyenzeke yezinkinga). Uchwepheshe ukhetha iqoqo amalungiselelo adingekayo kuhlanganise saziso samanje imithi elwa namagciwane, kusho zokususa ukuvuvukala. Uma kudingekile, isiguli kuthatha amaphilisi ezinhlungu. Izimali egciwaneni herpes zihlanganisa amaphilisi kanye MAZ ekhethekile (ukusetshenziswa yangaphandle). Kufanele kuqashelwe ukuthi ijeli kunikeza Chile omuhle kuphela uma sisetshenziswa esigabeni sokuqala (at ngokulambisa uvele ububomvu nobuhlungu syndrome). Uma sithinta amehlo isiguli sidinga esibhedlela. It kwandisa ukusebenza yokugoma ngokumelene ukuphathwa herpes. Izosiza ukuze kakhulu ukunciphisa inani ngangibuye ngihluleke.
Umgomo ngokumelene igciwane
Inani elikhulu weenhlahla baqhuba ucwaningo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa izidakamizwa ngempumelelo ngokumelene igciwane. Ekuqaleni lakhiwa lokugoma ngokumelene herpes zoster, okuyinto evivinywa amadoda futhi abesifazane. Ngeshwa, kwathi-ke akunamthelela wobulili namandla. Kuba nemiphumela emihle kakhulu kufezekiswe ososayensi kusukela UK. izidakamizwa yabo kunciphise ingozi yokutheleleka, futhi lesi sifo onomoya omnene. ESoviet Union futhi kwadingeka ukuthuthukiswa yayo. Ukwelashwa lalinabashumayeli 5 imijovo yayiqhutshelwa nge isikhawu ezithile (izinsuku ezimbalwa). Nokho, umgomo obunjalo obenziwa herpes futhi kwadingeka Izibuyekezo okuxubile. Kwezinye izimo, lokubuya kwesifo akusho ukuthola noma iyiphi ezincane.
izidakamizwa yamanje yokugoma
Isenzo yokugoma yesimanje okuhloswe ngaso ukwakheka amasosha omzimba ukuba Amagciwane. kunjalo futhi ukwazi ukuyeka ekuphindeni kwesikhathi sasivumela eside. Ukugonywa ngokumelene herpes - wokugoma - has a isiko abahlala ngezithako zawo, kodwa amandla abo okuphila umlilo Lesifo kakhulu buthaka. Enye yalezi izidakamizwa - "Vitagerpavak". Ngokuvamile umjovo eziye zasetshenziselwa ukulwa izinhlobo sokuqala nesesibili amagciwane. Umjovo kwenziwa endaweni ibhodi lemisindo. Yonke inkambo kuhlanganisa 5 ezinikezwa. Isikhawu Mezhuyev ukwethulwa izidakamizwa e ukubekezelelana ovamile esingangesonto. Ochwepheshe basikisela Yiqiniso yesibili umjovo izinyanga eziyisithupha ngemuva. Kuze kube manje, kukhona yokufakelwa silwanyana herpes, okuyinto isusiwe isakhi sofuzo esiyimbangela yalesi ukungena amaseli. Ngakho, "ukungcoliswa" livela kanye kuphela, futhi ukutheleleka okwengeziwe ingekho. Nokho, umgomo obunjalo obenziwa herpes (izibuyekezo Ochwepheshe bathi sekwanele ukusebenza yayo) udinga ukuba ngcono.
Izimo yokugoma. yezinkinga kungenzeka
Kukhona amaphuzu amaningana, khona okuyinto contraindication ngoba zokukhwabanisa. Okokuqala, wokugoma kufanele ulinde uma igciwane esigabeni asebenzayo. Ukugonywa ngokumelene herpes akuvunyelwe nakancane ngesikhathi sokukhulelwa, kanye khona-AIDS (ifomu esebenzayo). Esinye isici asivumelekile - imfiva, nezinye izifo ezithathelwanayo. Ngokuvamile kukhona umbuzo mayelana ukuze zigonywe lapho. Kukhona izikhungo yokugoma (kodwa ikakhulu zingabantu commercial). Kulapho ungenza wokugoma. izindleko zayo incane. Ngaphezu kwalokho, cishe zonke emitholampilo yangasese ukunikezela le nsizakalo njengoba yokugoma ngokumelene herpes. Ivelaphi - akusiwona inkinga, akunikeze imithi, futhi udokotela can (isibonelo, udokotela wezifo zabesifazane). Ngokuvamile, umgomo idluliswe kalula ngokwanele. Kepha akusimina kodwa ukubeka eceleni ukwanda lokushisa, ubuthakathaka. Isayithi umjovo kungaba othi awube kancane. Kakhulu akuvamile wabonakaliswa izimpawu nomzimba. Sibekezele amanothi palpitations, ukuphefumula kuba nzima, igeleza isuka emphinjeni. Skin iba ugodo, urticaria zingavela. Kulokhu, kunesidingo esiphuthumayo nokufuna usizo lochwepheshe.
Izindlela nokuvinjelwa okuvela herpes
Isici esiyinhloko ukuthi kuthinta yini noma cha igciwane icushiwe, yisimo sokuthokoza amasosha omzimba. Kuphela uma ezomvikela somzimba ezingeni ukuphakama akakwazi esabe we nesenzakalo ezingemnandi izifo ezinjalo. Ukuvimbela i-herpes on the izindebe inikeza ukwelashwa esifike ngesikhathi kuzo zonke izifo zamanje, labo ezingamahlalakhona ikakhulukazi. Kubalulekile futhi kakhulu ukugwema hypothermia. Nokho, isamba ngokweqile elangeni elishisayo iyakwazi nokuba mbaxa ingqondo isifo. Wonke umuntu uyazi ukuthi ukucindezeleka akuyona indlela engcono kakhulu ezithinta izindlela ukuzivikela zomzimba. Ngakho ungadikibali ku imizwelo engakhi. Ukuvimbela i-herpes on the izindebe kuqedile ngaphandle ukudla okufanele (inala amavithamini). Futhi-ke, ungakhohlwa mayelana nenhlanzeko yomuntu siqu.
Izidakamizwa "Bactrim": isitatimende
Dzhon Kendi - elidumile ahlekisayo umlingisi, umbhali kanye umkhiqizi
Indawo okubi kakhulu eMhlabeni. Top 5